Torres miyaa qiimo gabay, Mise Chelsea ayaa qaldan.? - Caasimada Online
Home Warar Torres miyaa qiimo gabay, Mise Chelsea ayaa qaldan.?
Torres miyaa qiimo gabay, Mise Chelsea ayaa qaldan.?
Qofna kuma uusan fikirin micnahaan inuu Fernando Torres sidaan noqon doono, waxaan halkaan idinkugu soo gudbineynaa maqaal uu ka qoray Wargeyska Daily Mirror.
Wuxuu Chelsea ugu soo dhaqaaqay lacag xad ka bax ah ka dib markii uu Roman ­Abramovich Bank-ga u jebshay uuna kula soo wareegay 50 milyan oo ginni, wuxuuna doonayey inuu El Nino isbedel ka sameeyo Blues.
Laakiin 22 bilood, sedax tababare iyo hada oo uu dhaliyey 18 gool, Torres ayaa shaqadiisa Stamford Bridge waxay gaartay halkii ugu xumeyd markii keydka lagu bilaabay kulankii Juve, kooxduna ay noqotay mid aanba ku xisaabtamin booskiisa weerarka.
Roberto Di Matteo ayaa xilli ciyaareedkii hore kulamo dhowr ah ciyaarsiiyey, laakiin tababaraha reer Talyaani ayaa arkay inuusan willka reer Spain dabooli Karin ama qaban Karin shaqadii Didier Drogba, oo kooxda ka hayaamay markii uu ku hugaamiyey Champions League sanadkii hore.
Torres xitta laguma bedelin booskiisa Daniel ­Sturridge, taas bedelkeeda Di Matteo ayaa door biday inuu Eden Hazard ciyaarsiiyo No. 9 been ah.
Hazard, sidii la saadaalinayaba, booskaan kuma uusan laheyn saameyn wuxuuna Di Matteo u yeeray Torres daqiiqadii 71aad iyadoo Blues ciyaarta looga hugaaminayo 2-0.
Laakiin mar kale ayuu isku soo bandhigay inuusan isbedel sameyn Karin daafacdayaasha Champions League ayaana u eg kuwo koobkaan kasoo haray hadii aysan Juve habaar kala kulmin kulanka ay wajahayaan Shaqkhtar Donetsk.
Si kastaba, gunaanadkii Torres wuxuu u muuqdaa mid qiimo gabay, Chelsea ayaana dooneysa inay booskiisa u keensato Falcao.
Hadaba aan akhristeyaasha u dhaafnee, Torres miyaa qiimo gabay, Ma Chelsea ayeysan kubadiisu oolin, ma ciyaartoyda ayuusan fahmin, mise Chelsea ayaaba Flop ah.? Maadaama la xasuusto inay sidaan oo kale ugu halabeen Weeraryahano kale oo fara badan, markii ay yimaadeen kooxdaan.